Abiy Axmed oo loodhaariyay Ra’iisulWasaaraha Ethiopia - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Abiy Axmed oo loodhaariyay Ra’iisulWasaaraha Ethiopia
Abiy Axmed oo loodhaariyay Ra’iisulWasaaraha Ethiopia
April 2, 2018 admin341
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa ra’iisulwasaare u doortay Abiy Axmed, waxaana isla markiiba loo dhaariyay xilka.
Ra’iisulwasaaraha cusub oo khudbad ka horjeediyay xildhibaannada ayaa qiray in “dimuqraadiyadda curdanka ah” ee dalku ay horseeday in ay muwaadiniin dhintaan sannadihii u dambeeyay.
Kumannaan dad ah ayaa la xidhay, tiro aan la ogaynna way dhinteen intii ay mudaaharaadyadu ka socdeen Itoobiya tan iyo markii ay billawdeen sannadkii 2015kii.
Dr Axmed ayaa sidoo kale raaligaliyay dhammaan dadka xuquuqda aadanaha u dooda, siyaasiyiinta iyo dibadbaxyaasha ay qiimaha sare ugu kacday isbadalkii ay dalbanayeen.
Ra’iisulwasaaraha ayaa sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in ay Eritrea kala shaqayso sidii loo xalin lahaa muranka u dhaxeeya labada dal iyada oo lawada xaajoonayo.
Isaga oo diiradda saaraya midnimada, qanaacada, caddaaladda iyo iscafintana, Ra’iisulwasaare Abiy wuxuu siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qurbajoogta Itoobiyaanka ah ugu baaqay in laga wada shaqeeyo isafgarad qaran.
Wuxuu sidoo kale ka hadlay in wax laga barto khaladaadkii horay loogalay, lagana shaqeeqo midnimada dalka.
Dr Abiy ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in awood wareejinta maanta ay keenayso fursad taariikhi ah oo baal cusub u furaysa taariikhda siyaasadeed ee Itoobiya.
Dad badan ayuu ahmiyad gaar ah u leeyahay isbadalkani, sababtuna waxay tahay in Abiy uu ka soo jeedo qawmiyadda Oromada, gobolkaas oo ay mudaaharaadyo waawayn iyo degenaansho la’aan ka jirtay wakhtiyadii dambe.
Xulashadii hore ee xisbiga
Isbahaysiga haya talada Itoobiya ayaa doortay hogaamiye cusub oo ka dhashay qoomiyadda Oromo ee dalkaas, oo ku dhawaad muddo saddex sanadooda ahaa dadka ugu badan ee waday mudaharaadyo dawladda lagaga soo horjeedo.
Abiy Axmed ayaa helay in ka badan 60% codadkii la dhiibtay, sida ay faafisay warbaahinta dawladda xidhiidhka la lihi.
Doorashadaasi waxay dhabbaha u xaadhay in uu xilka ra’isal wasaarenimo kala wareego lahaa Hailemariam Desalegn oo bishii hore is casilay. Waxaana dalka lagu soo rogay xaalad degdeg ah maalintii ka dambaysay markii uu is casilay.
Warbixin laga sii daayey idaacadda dawladda ayaa sheegtay in xaaladda degdega ahi ahayd ma huraan lagu xakamaynayo mawjadaha mudaharaadada ah ee dawladda lagaga soo horjeedo ee dalka oo dhan ka kacsanaa ilaa 2015-kii, kuwaas oo ay sababeen arrimo door ah oo ay shacabku tabanayeen.
Waxa jirta rajo ah in isbedelka hogaanka sare suurto gelin doono in wax laga qabto tabashooyinkaa qaarkood.
Hadaba waa kuma Abiy Ahmed?
Abiy oo loo arkayey inuu ahaa kan ugu cadcad ragga tartanka ugu jiray buuxinta jagada uu banneeyey ra’isal wasaarihii is casilay, waa hogaamiyaha xisbiga Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) oo ah mid ka mida afarta xisbi qawmiyadeed ee uu ka koobanyahay isbahaysiga talada dalka haya ee Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF).
Dadka lafa gura siyaasaddu, waxay ku sheegaan inuu yahay siyaasi fiiro dheer oo aqoon ciidan iyo mid tacliineed oo heer sare ah leh.
Wuxu ku dhashay magaalada Agaro ee gobolka Oromia oo waxa dhalay qoys iskugu jira Masiixiyiin iyo Muslimiin. Waa 42 jir waxaanu xisbiga OPDO ku biiray dabayaaqadii sideetameeyadii.
Wuxu galay ciidanka oo waxa uu ka gaadhay darajada Kornayl, sidoo kale waxa uu ka mid noqday ciidamo nabad ilaalineed oo Ethiopian ah oo Qaramda Midoobay u dirtay Rwanda.
Wuxu ahaa ninkii aasaasay isla markaana agaasimaha ka noqday wakaaladda nabad gelyada internet-ka ee dalka intii u dhaxaysay 2009 iyo 2012, ka dibna waxa uu noqday wasiirka Sayniska iyo Tiknoolajiyadda.
Dad badan baa waxay u arkaan in uu yahay qof hadallo cadcad oo karti leh, gaar ahaan dhinaca hogaaminta dad isku wadka leh.
Waxa la rumaysanyahay in Abiy uu taageero wayn ka haysto dhallinyarada Oromada iyo sidoo kale qoomiyadaha kale.
Dadka dhaliilaa se waxay leeyihiin maadaama oo uu xubin keliya ka yahay isbahaysiga talada haya, awood u yeelan maayo in uu isbedellada badan ee dadka mudaharaadayaa doonayaan meel mariyo.
Ku dhawaad 10 Qof oo ku dhimatay Qarax ka dhacay Buuloburde
Daawo: Tiicey oo si heer sare loogu soo dhaweeyey London
June 13, 2017 Cali Yare
Golaha shacabka ayaa ansixiyay sharciga doorashooyinka qaranka
December 28, 2019 December 28, 2019 Duceysane
Ahlusuna oo dowlada federaalka ku eedaysay faragalinta doorashada Galmudug
January 21, 2020 Duceysane 0